ဆေးတက္ကသိုလ်, တောင်ကြီး. ဆေးတက္ကသိုလ် သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပ
ⓘ ဆေးတက္ကသိုလ်, တောင်ကြီး. ဆေးတက္ကသိုလ် သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဉ္စမမြောက် ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်နှင ..
ဟာဗားနားမြို့ သည် အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုရှိ ကျူးဘားသမ္မတနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ထိုကျွန်းစုတွင် အကြီးဆုံးမြို့လည်းဖြစ်သည်။ ကျူးဘားကျွန်း၏ အနောက်မြောက်ဖက်ကမ်းခြေတွင်တည်ရှိ၍ အခြားမြို့ကြီးများနှင့် မီးရထားလမ်း၊ မော်တော်ကားလမ်းတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်လျက်ရှိသည်။ လေကြောင်းခရီးနှင့် ပင်လယ်ကြောင်းခရီးတို့အတွက် စခန်းမြို့လည်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ကီးဝက်မှ မိုင်၁ဝဝခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ဟာဗားနားသင်္ဘောဆိပ်သည် ဟာဗားနားပင်လယ်အော် အတွင်း၌တည်ရှိခြင်းကြောင့် ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများ ဆိုက်ကပ်ရန်အတွက် လုံခြုံသောသင်္ဘောဆိပ်ကောင်းဖြစ်သည်။ ဟာဗားနားမြို့ကို မြို့သစ်နှင့်မြို့ဟောင်းဟူ၍ ပို ...
ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်တယ် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မာတင်လူသာကင်း ဂျူနီယာ က ၁၉၆၃ ဩဂုတ် ၂၈ ၌ "အလုပ်အကိုင်နှင့် လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် လူထုချီတက်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သော လူထုမိန့်ခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါရက်၌ ကင်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအဆုံးသတ်ရေး၊ နိုင်ငံသားနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကို တောင်းဆိုခဲ့လေသည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့၊ လင်ကွန်းအမှတ်တရ အဆောက်အအုံ၏ လှေကားထစ်များမှနေ၍ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံသူ လူပေါင်း နှစ်သိန်းခွဲကို မိန့်ကြားပြီး ထိုမိန့်ခွန်းစကားသည် နိုင်ငံသားအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အလွန်ထင်ရှားပေါ်လွင်သောဖြစ်ရပ် တစ်ခုလည်းဖြ ...
ⓘ ဆေးတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး)
ဆေးတက္ကသိုလ် သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဉ္စမမြောက် ဆေးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ တက်ရောက်နိုင်သည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းစတင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ဖွင့်ပွဲကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒုတိယဝန်ကြီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် တောင်ကြီး သည် အကျယ်အဝန်း မြေဧရိယာ ၄၆ ဧကပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် သုံးထပ်အဆောက်အအုံ ဖြစ်သည်။ သုံးထပ် ပင်မဆောင်၊ သုံးထပ်သင်ကြားရေးဆောင်၊ လူ ၂၅၀ ဆံ့ စာသင်ဆောင်၊ အမှုထမ်းအိမ်ရာ၊ အရာထမ်းအိမ်ရာ ၄ ခန်းတွဲ လေးထပ်ဆောင်၊ ပါမောက္ခချုပ်နေအိမ်၊ အရာထမ်းဆောင်၊ Lecture Theatre၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကျောင်းသူ အိပ်ဆောင်၊ ဧည့်ရိပ်သာ ၄ ခန်းတွဲ သုံးထပ်ဆောင်၊ ကျောင်းသား အိပ်ဆောင်၊ ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ် နေအိမ်၂ထပ်၊စာကြည့်တိုက်၊ E-Language Lab ၊ E-Library တို့ ပါဝင်သည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် တောင်ကြီး မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား သင်ကြား ပေးနိုင်ရေးအတွက် စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးနှင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးဆေးရုံတို့အား သင်ကြားရေး ဆေးရုံကြီးများအဖြစ် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိသည်။
ဆေးတက္ကသိုလ် ​တောင်ကြီးတွင် ဘွဲ့ရ​​​ကျောင်းသားများမရှိ​သေးဘဲ ယခုအမြင့်ဆုံးသင်ကြား​နေ​သောအတန်းမှာ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း က ဖြစ်သည်။
Wikipedia: ဆေးတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး)